တရုတ်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြပွဲသို့ တက်ရောက်မည့် ကုမ္ပဏီ ၅,၀၀၀ ကျော်ရှိ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း ဖူကျန့်ပြည်နယ် ရှမန်မြို့ရှိ ရထားဘူတာရုံတစ်ခု၌ ဧပြီလ ၁၀ ရက်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော အလုပ်သမားများအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဖူကျိုး ၊ စက်တင်ဘာ ၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း ဖူကျန့်ပြည်နယ် ရှမန်မြို့၌ စက်တင်ဘာ ၈ ရက်တွင် စတင်မည့် ၂၁ ကြိမ်မြောက် တရုတ်နိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် ကုန်သွယ်ရေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြပွဲ(CIFIT)သို့ နိုင်ငံ နှင့် ဒေသ ၁၀၀ နီးပါးမှ ကုမ္ပဏီ ၅,၀၀၀ ကျော် တက်ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြပွဲစီစဉ်သူက စက်တင်ဘာ ၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
စတုရန်းမီတာ ၁၀၀,၀၀၀ ကျော် ကျယ်ဝန်းသော ပြပွဲကျင်းပမည့်နေရာတွင် တင်းကြပ်သော ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး အစီအမံများနှင့်အတူ လေးရက်ကြာ ကျင်းပမည့် ယင်းပြပွဲတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ၅၀,၀၀၀ ကျော်သည် အွန်လိုင်း နှင့် အော့ဖ်လိုင်း နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် တက်ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အစည်းအဝေး နှင့် ဆွေးနွေးပွဲ ၃၀ ကျော်တွင် ရပ်ဝန်း နှင့် ပိုးလမ်းမ တည်ဆောက်ရေး ၊ ဒီဂျစ်တယ် နှင့် အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး ၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှု ကင်းစင်ရေးတို့ အပါအဝင် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် အဓိကခေါင်းစဉ်များအဖြစ် ဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေး အေဂျင်စီ၏ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး Li Yong က စက်တင်ဘာ ၆ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ပြပွဲအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လှုပ်ရှားမှုများ မြှင့်တင်ရန် စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ၊ အဖွဲ့အစည်းများစွာ နှင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့ချုပ် ၊ ကမ္ဘာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အေဂျင်စီများ စသည်တို့အပါအဝင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများက ပူးပေါင်းစီစဉ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Over 5,000 companies to attend China int’l investment fair
FUZHOU, Sept.6(Xinhua) — Over 5,000 companies from nearly 100 countries and regions will attend the 21st China International Fair for Investment and Trade (CIFIT). It will launch Wednesday in Xiamen City in southeast China’s Fujian Province, the organizer said Monday.
The event is jointly organized by the Ministry of Commerce, several associations, and international organizations, including the World Trade Organization and the World Association of Investment Promotion Agencies, to boost international investment activities. ■
Photo – Workers useacrane trolley to liftaChina-Europe freight train atarailway station in Xiamen, southeast China’s Fujian Province on April 10, 2021. (Xinhua/Wei Peiquan)